Nin Yuhuudi-Ruush ah ayaa ka dhoofayay madaarka Mosco, badhaaha Kastamka ayaa dharkiisa ka soo dhex saaray sanam yar, waxaana uu weydiiyay “ Muxu ahaa waxani “ . Yuhuudiga ayaa ugu jawaabay “ Ha odhan sidaasi, Ninkani waa Lenin , waana hogaamiyihi shuuciyadda khayrka iyo barwaaqada horseeday , waxaan u sitaa inaan ka barakaysto mar kasta oo aanan weligay ilaabin”. Baadhaha ayuu hadalkaasi dareen ku reebay waana uu sii daayay isagoo ku yidhi waa sax iska soco.
Markii uu ka degay Madaarka Talabiid ee Israa’iil ayuu haddana baadhihii kastamka dharkiisa ka soo dhex saaray sanamkii yaraa waana uu ku yidhi “ muxu ahaa waxni”. Ruush–Yuhuudiga ayaa ugu jawaabay “ Miyaanad garanayn, waa Lenin waa denbiilihi weynaa, waana kan Ruushka sababtiis ay u burburtay, waxaan u sitaa inaan wakhti kasta nacdalo oo habaaro“. Baadhaha ayuu hadalkaasi ku sameeyay dareen waana usii daayay.
Markii uu gurigiisa tegayna waxa uu sudhay sanamkii yaraa gidaarka qolkiisa . Maalin ayay u timi gabadh uu adeer u yahay waxayna weydiisay sanamkan meesha sudhani muxuu yahay waxaana uu ugu jawaabay “ Waa sanam yar oo aan gudihiisa ku soo qariyay 10 kg oo dahab oo aan kastamyada ku soo dhaafiyay iyadoon la iga qaadin wax cashuur ah “ . Siyaasadu waa arin keliya oo aad dadka siyaabo kala duwan ugu sharaxayso laakiin waxa muhiim ah in qof kastaa ku qanco sharaxaasi. Sida sadexdan qof ugu qanceen.